कृष्णको जन्म दर्ता र भगवान भएको प्रमाण माग – Sourya Online
कृष्णको जन्म दर्ता र भगवान भएको प्रमाण माग
सौर्य अनलाइन २०७५ असोज १७ गते ११:१८ मा प्रकाशित
मथुरा । छत्तिसगढको एक सूचनाको हकका अभियन्ताले मथुराको जिल्ला प्रशासनसंग कृष्णको जन्म, उनको गाउँ, भगवान भएको र लिलाहरूको सबै जानकारी माग गरेका छन् ।
मथुरा जिल्ला प्रशासनका अधिकारी यो निदेदन देखेर अलमलमा परेका छन् । उनीहरू के जवाफ दिने भनेर अलमलमा परेको बताइएको छ । छत्तिसगढका जैनेन्द्रकुमार गैंदलले निवेदनमा प्श्न गर्दै सोधेका छन् ‘३ सेप्टेम्वरमा भारतभरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएर कृष्णजन्माष्टमी मनाइयो ।
त्यसकारण मलाई भगवान श्रीकृष्णको जन्म दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध गराइयोस् ।’ यो प्रमाणले कृष्णको जन्म सोही दिन भएको प्रमाणित हुन सकोस् ।
अर्को कुरा उनले भनेका छन् ‘के उनी साच्चै भगवान थिए ? थिए भने कसरी ? उनी भगवान भएको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि उपलब्ध गराइयोस् ।’ गेंदलेले भगवान श्रीकृष्ण कुन गाउँका वासिन्दा थिए ? उनले कहाँ, कहाँ र के के लिला गरे ?’
यस्तो निवेदनले अलमलमा परेका एडिएम रमेशचन्द्रले हिन्दू धर्मका सबैजसो ग्रन्थमा यसको जवाफ पाइने बताउँछन् । पुस्तक तथा ग्रन्थहरूमा कृष्णको जन्म द्वापर युगमा तत्कालिन शौरसेन (जसलाई अहिले मथुरा भनिन्छ) मा भएको उल्लेख छ ।
उनले तत्कालिन शौरसेनका राजा कंसको हत्या गरेर द्वारिका जानुअघि पाइला, पाइलामा अनेक लिला गरेका थिए । धार्मीक आस्थासंग जोडिएको यस्तो प्रश्नको जवाफ के दिने ? भन्ने विचारविमर्श भइरहेको एडिएम रमेशचन्द्रले बताए ।
भारतमा रहेका आफ्ना नागरिक फर्काउँदै चीन
दुई हजार तालिबानी लडाकू जेलमुक्त
पाकिस्तानमा ९० यात्रु चढेको जहाज दुर्घटना
आँधीले भारत र बंगलादेशमा ८४ जनाको मृत्यु
विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिए राष्ट्रपति ट्रम्पले चेतावनी
‘कोरोनाविरुद्ध खोपको परीक्षण सफल भयो’
घरभाडा छुट गराउन माग
विप्लव समूहकी नेतृको भारतमा निधन
साँझ ५ बजे बोलाइयो सर्वदलीय बैठक
राष्ट्रियसभामा मागियो रुकुम घटनाको जवाफ
महिला लघुवित्तले गरायाे कर्मचारीको कोरोना बीमा
थप ९ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित संख्या ४५३ पुग्यो